Ihe mgbochi anọ: Ihe kpatara ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ IT ji enwe akwụkwọ
E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ IT na-enwe ọganihu n'ime ụwa azụmahịa,mana n'ihi ihe ụfọdụ, ọ bụ naanị mkpịsị aka nwere blog na weebụsaịtị ha. Ọtụtụ n'ime ITụlọ ọrụ na-agbaso usoro ịzụ ahịa omenala ma ọ bụ chọpụta ya siri ikena oge na-eri iji bido blog. Otú ọ dị, ụlọ ọrụ ndị ahụ na-agba ụlọ ọrụblog ga-emesị nweta ụgwọ ọrụ nke ime otú ahụ. Julia Vashneva, Ọganihu Ndị AhịaOnye nlekọta nke Ụlọ ihe ntanetị Ọrụ Ntanetị, kọwaa uru ndị na-ebi na blog na-eweta ụlọ ọrụ ọrụ IT.
Igosipụta ịdị n'otu nke Ọrụ
Ịzụ ahịa ọdịnaya bụ akụkụ dị mkpa nke mmepe ahịa na ụwa.Ọtụtụ ụlọ ahịa na-aga na dijitalụ na mobile, ya mere, ahịa ahịa aghọwodị mkpa maka ọgbọ na nduzi. N'otu oge ahụ, ọdịichenwere ike ịbụ nsogbu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ọrụ IT, ka ha na-emeso yaotu ulo oru kwa ubochi. Mgbe ị mepụtara blog, ị na-eke ihe pụrụ iche,ihe na-eme ka i si n'ìgwè ahụ pụọ. Iji ya, ị nwere ike igosi àgwà gị,ụkpụrụ omume gị, njirimara nke ụlọ ọrụ gị, wdg, nke ga - enyere ndị na - achọ ahịa aka ịhọrọ ụlọ ọrụ gị n'etiti ndị ọzọ.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ IT na-ejikọta onwe ha n'otu n'otu ka ha na-eji otu okwu ahụ.Ya mere, olee otu ha ga - esi jide n'aka na azụmahịa gị dị mma karịa ụlọ ọrụ ọzọ? Na otuonye na-achọ ịchọta ahịa nwere ike ịhụ na ndị otu gị maara nke ọma iji nweta ọrụ ahụmere? Ọtụtụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ IT na-adaberekarị na okwu ọnụ ma ọ bụ ịkpọọ oyiọrụ, mana blog nwere ike ịmepe ihe dị iche,usoro siri ike nke inweta ndị ahịa ọhụrụ.
Na-egosi Ahụmahụ na Ahụmahụ
Aha 'About Us' nke ụlọ ọrụ weebụ ọ bụla dị ezigbo mkpa mgbe ị na-adọtandị ahịa ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị na-ekwu na onye njikwa gị ma ọ bụ onye ndú nwere ọtụtụ afọahụmahụ, dịka otu ụlọ ọrụ ọ bụla, o doro anya, ọ ga-adị ka ọ bụ ihe ọjọọ.Site n'enyemaka nke blog, n'ụzọ dị iche, i nwere ike igosi ahụmahụ gịna njikwa ọrụ, nke mere na ịrịọ ndị ị chọrọ ịchọrọ. Ọ dịtụọ dị mfe ime, mana akwụkwọ akụkọ ndị dị otú ahụ na-egosipụta ihe kachasị mkpa nke ihe niile ịchọrọ ịkwalite.
Ịkwalite azụmahịa gị
Blog ga-aghọ nnukwu ihe ikpo okwu maka iweta obodo ọrụ IT.Ozugbo ịdere na blog ụlọ ọrụ gị, ị na-ebute nkwurịta okwu, nkebụ oghe maka ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na ndị ahịa. Nzaghachi ị nwetaraga-enyere gị aka ịkwalite ọrụ gị na ndị dị iche iche. Ọ bụrụ na ịnweta ikikeọdịnaya na blog gị, ọ ga-etinye ụlọ ọrụ gị na map.
Na-eweta Nduzi Ọhụrụ
Nyocha ndị gara aga na-egosi na ụlọ ọrụ B2B na-agba ọsọ na blog ga-emepụta ruo 67% karịana-eduga karịa ụlọ ọrụ na-enweghị ya, na B2C ụlọ ọrụ nwere ọnụego a gụrụna 88% dika. Mgbe ị na-eke usoro ịzụ ahịa gị,blog gị kwesịrị ịbụ akụkụ dị oké mkpa nke ya. N'ezie, na iji Ngini NghotaNjikarịcha (SEO) usoro na posts posts na enyere ụlọ ọrụ aka ka mmaọkwa. Enweghị ezigbo ego nke metụtara ọdịnaya, ọ gaghị ekwe omumeiji nweta. Mgbe ị megharịrị blog gị maka ebumnuche SEO, ị ga-edozina-adọta uche ndị ahịa.
Ịnweta ma na-agbagharị na blog chọrọ mgbalị dị njikere nke onye dị njikeremaka ịrụsi ọrụ ike, nyocha ma nwee agụụ maka isiokwu ahụ. Otú ọ dị, ọrụ ITụlọ ọrụ ga-ama ọganihu ọ ga-enwe na azụmahịa.Ndị ahịa nke Semalt Digital Agency egosiwo nke ọma na nloghachi nke ego na itinye ego na ya bara uru Source .